Vectr: yemahara uye yakapusa software ye vector mifananidzo | Linux Vakapindwa muropa
Vectr - yemahara uye yakapusa software yevector mifananidzo
Kune akawanda mapurojekiti anogona kutsiva software senge Adobe Photoshop paLinux, senge GIMP, Krita, Inskcape nevamwe vazhinji. Pamusoro peaya matatu emahara uye akavhurwa sosi dzimwe nzira, iwe unogona zvakare kuwana dzimwe mhinduro dzinogona kuve dzinonakidza mune dzimwe nguva, senge paunenge uine komputa ine mashoma zvigadzirwa zvehardware. Ndiri kureva Vectr, kunyangwe ini ndichiona kuti muridzi.
Semuenzaniso, fungidzira iwe uchida kushandisa vector mifananidzo software pakombuta yekare kana paRaspberry Pi kana maSBC akafanana. Muchiitiko ichocho, kuisa rinorema software haisi sarudzo huru. Muzviitiko izvi unogona kutsvaga kugona kweVectr, software yemahara yaunogona kushandisa ese ari maviri kubva pawebhusaiti yako (Izvo hazvidi kunyoreswa, iwe pinda chinongedzo uye wotanga kugadzirisa) uye kubva pakombuta yako (inowanikwa kune akati wandei mapuratifomu, zvakare Linux, macOS, Windows uye ChromeOS, uye iwe unayo zvakare mune repos yemazhinji distros).
Vectr yakapusa uye ine Graphic inowanikwa yakagadzirwa muElectron. Kubva mairi unogona kuve nematurusi akati wandei ekuisa mifananidzo uye nekugadzirisa iwo. Zvese izvi pasina kudzidza kudzidza mapurogiramu akaomeswa akatakura maficha uye maturusi ayo anoitirwa zvakanyanya kune nyanzvi uye vanhu vane ruzivo kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Vectr inobvumira dzidza kuti inoshanda sei nekukurumidza uye iwe unogona kutanga kugadzirisa kubva pakutanga. Uye kwete izvo chete, zvinowirirana zvakanyanya maererano nemifananidzo ye2D iyo inotsigira kugadzirisa, nekuti ichakubatsira iwe kugadzira zvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvemalogo, mifananidzo yekuratidzira, makadhi, mifananidzo uye magadzirirwo emawebhusaiti, nezvimwe.
Kubvuma mafomu seSVG, EPS, PNG, JPEG, nezvimwe. Uye iwe unenge uine maturusi emitsara yakatwasuka, makakombama, mapolgoni, yakazara yakazara palette yekupenda, maturusi ekudhirowa, nezvimwe.
Mamwe mashoko uye Vectr kurodha pasi - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Vectr - yemahara uye yakapusa software yevector mifananidzo
Google Inotangisa Zvizere Homomorphic Encryption